Tia ianao. Ary tsara izany! Fa misy ny olana: ny sakaizanao dia mankahala an'ity lehilahy ity. Inona no hatao - mba hahazoana azy io indray na hitazomana ny fisakaizana? Andao hiaraha-mahita!
Tsy maninona na firy na firy ny zazavavy no mifanome toky ary mampanantena fa tsy hiady amin'ny lehilahy mihitsy (rehefa dinihina tokoa fisakaizana zava-dehibe kokoa!), maro no mbola miafara amin'ity toe-javatra ity, indrisy, tsy ny tsirairay no mahomby amin'ny famoahana ny tenany avy tsy misy fatiantoka, fifamaliana ary fanafintohinana. Ary ahoana no nitrangan'izany? Rehefa dinihina tokoa, manodidina ny ranomasina mangatsiatsiaka, ary ny tena zava-dehibe - ry zalahy afaka, misafidy olona ary mankafiza ny fiainana!
Tsia - nahavita nifankatia ianao sy ny sakaizanao tamin'ity iray ity! Aleo ajanona eo noho eo, fa ny fitiavana, fantatrao, dia tovovavy maditra ary afaka manodina ny lohanao ka manadino anao avy hatrany ny fianianana nomena ny namanao, sy ny finamanana ary ny namanao mihitsy . Mifanipaka amin'ny fieritreretana ny fahatsapana ary iza no handresy amin'ity ady ity - miankina aminao ihany.
Ny mahatsara sy maharatsy - iza no zava-dehibe kokoa, ny finamanana sa ny fitiavana?
Iza no tokony hofidinao? Mora ny manome torohevitra ho an'ireo izay mbola tsy tao anatin'ny toe-javatra toy izany. Ho azy ireo dia mazava toy ny andro fa ny safidy dia tsy maintsy isalasalana fa fisakaizana. Rehefa dinihina tokoa, dia mbola hanana lehilahy maro ianao - azonao atao ny manangona azy ireo ao anaty stack, fa miezaha mitady namana mahatoky azonao ianteherana toy ny tenanao.
Ary iza no nilaza fa manana izany fitiavana izany mandrakizay ianao? Eny, milalao fitia, mihaona mandritra ny iray na roa volana, mandra-pahatongan'ny tsirairay fialam-boly manodidina anao tsirairay, "mandrakizay" hafa. Eto ihany no tsy eo intsony ilay sipa hiarahan'izy ireo mifampizara ilay fifaliana tsy ampoizina.
Eny, mety ho izany no izy, fa mety ho hafa. Ary raha ny raharaha miaraka amin'ity lehilahy ity no lasa vanim-potoana tsara indrindra sy mahafinaritra indrindra amin'ny fiainanao? Ary noho ny fotoan'ity fahasambarana ity dia tsy matahotra ny hanao vivery ny fihavanana ianao.
Ka hita fa alohan'ny hanaovanao zavatra dia mila mieritreritra tsara ianao, mendrika ny hisarika anao ve ity rangahy ity? Angamba, tsara, izy? Tsia? Izy ve no andriana mpanonofy indrindra? Diniho ary avy eo!
Tetika ady - mandeha mitady fika
Eny, tsy misy mahalala izay ho avy sy ny fomba fiasa tsara indrindra. Eny, mety ny fonao fotsiny. Na izany aza, azonao atao ny manandrana manandratra ny lambam-baravarana amin'ny ho avy ary mamantatra izay mety haterak'izany na izany fanapahan-kevitra izany.
Izahay dia tsy hanafina ny zava-misy fa raha zazalahy mahafatifaty no lasa mahaliana anao miaraka amin'ny sakaizanao, dia tsy azonao atao ny misoroka ny ady an-tsekoly, ary miankina amin'ny tetikadinao ny vokatr'io ady io.
Hetsika mpiady anaty akata
Azonao atao, mazava ho azy, ny mitazona ny amboadia sy ny ondrilahy mba tsy hanana ahiahy. Izany hoe mifikitra miafina amin'ilay tovolahy, fa ataovy amin'ny fomba izay sady tsy nofinofy no tsy fanahy ny sakaiza. Mety handeha izy io, nefa tsy afaka tapa-bolana mahery.
Vetivety dia mbola ho fantany ihany ny zava-miafina ataonao - ary avy eo tsy azo ihodivirana ny ady. Manaiky fa tsy manao izany ny tena namana. Satria tsy vonona ny hamitaka azy amin'izany fomba izany ianao, dia mariho hatramin'ny farany ary lazao mivantana ny fikasanao.
Pact tsy fanoherana
Izao no fotoana tokony hahatsiarovanao ny voady nataonao sy ny namanao, ary hiresaka aminy ny fony. Tsara raha tsy mihozongozona ny fitsipiky ny tenanao manoloana ny fientanam-po mampihetsi-po. Avy eo dia azo alamina indray mandeha na indroa ny zava-drehetra: miaraka amin'izay dia omeo ny anjarany ilay tovolahy avy eo am-bavahady, ary eo no fiafarany. Ary mbola ho naman'ny tenanao ihany ianao. Saingy mety hitranga ihany koa fa, rehefa nahalala momba ny fihetseham-ponao ianao, dia hikorontana amin'ny faharesen-dahatrao rehetra ilay sipa, hanitsaka ny lasantsy ary hanary zavatra, izay hidina hatramin'ny zero ny vintana handresenao ity lehilahy ity.
Fantatrao kokoa ny fahamendrehana sy ny fahamendrehan'ny namanao, ary ny halehiben'ny vitany. Manatsoaka fehiny!
Miezaha handroaka ny toe-tsaina tia fifaninanana izay mitarika ny fahaliananao amin'ny olon-tianao, ary mankasitraka fotsiny ny maha-zava-dehibe ny fahazoanao azy. Manana fahatsapana tso-po sy mahery indrindra ho azy ve ianao? Avy eo tsy misy fanontaniana.
Na izany aza, raha toa anao ity dia tsy misy hafa noho ny filalaovana mandalo vetivety fotsiny, ary ny namanao dia lohalika am-pitiavana azy, tsy aleo ve manome azy? Ho fiasa mendri-kaja tokoa io avy aminao, izay hanamafy ny fisakaizanao aminy ihany. Ankoatr'izay, tsy ho very na inona na inona amin'izany ianao.
Teny ho an'ny mpilalao fototra
Sa angamba manontania fotsiny ny tompon'antoka amin'ny adin'ny tena, iza amin'izy ireo no tsy miraika aminao? Mety hitranga fa hanjavona irery ny olanao misafidy.
Rehefa dinihina tokoa, araka ny fantatrao, tsy afaka ny ho mahafatifaty an-kery ianao. Raha tezitra amin'ny sakaizanao izy, inona no antony hanandramana azy? Amin'ity tranga ity dia ho hendry kokoa ny hampifantoka ny sainao amin'ny olon-kafa mangoraka anao toy izay hiady amin'ny bandy tsy miraharaha anao, ary mety hamoy ny namanao akaiky indrindra aza.
Araka ny hitanao dia misy lalana maro. Mila mifidy izay mety aminao fotsiny ianao. Fa mandritra izany fotoana izany, miezaha hanao ny marina amin'ny tenanao sy ny namanao.
Samihafa ny fitiavana
Ny fianakaviana mety indrindra - inona no tokony hatao?
Fitiavana, fialonana, fahatokisana
Ny psikolojia lehilahy amin'ny fifandraisana amin'ny vehivavy: inona no tokony hoheverina?
Raha misy bandy mijery mahitsy eo imasony
58 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,416.